दुई दर्जन कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का : कुन-कुनले बुझाएनन् नविकरण शुल्क ? (सूचीसहित) — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > दुई दर्जन कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का : कुन-कुनले बुझाएनन् नविकरण शुल्क ? (सूचीसहित)
दुई दर्जन कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का : कुन-कुनले बुझाएनन् नविकरण शुल्क ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले वार्षिक नविकरण शुल्क नबुझाउने २५ ओटा कम्पनीको कारोबार रोक्का गरेको छ ।
यसअघि असोज १३ गते नै सूचना जारी गरी वार्षिक नविकरण शुल्क बुझाउन नेप्सेले सूचीकृत कम्पनीहरुलाई भनेको थियो ।
२०७७ कार्तिक २ गते १४:५२ मा प्रकाशित
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सुरु गर्यो पिओएस माध्यमबाट भुक्तानी
एयर काष्ठमण्डप : ल्याण्डिङका क्रममा दुर्घटना, दुई पाइलटको घटनास्थलमै निधन
विद्युत आयोजना निर्माण हुँदा आठ गाविस अन्धकारमा
यसरी किसानको घरबाटै बिक्न थाल्यो दूध
कार दुर्घटनामा उपप्रधानमन्त्रीको निधन